धनकुटामा शिक्षण अस्पताल सञ्चालनका लागि विज्ञ समूह पठाईने ः मन्त्री घिमिरे – Dhankuta News : Daily Online News From Nepal
धनकुटामा शिक्षण अस्पताल सञ्चालनका लागि विज्ञ समूह पठाईने ः मन्त्री घिमिरे
२०७६, ४ मंसिर बुधबार २३:२६
धनकुटा । १ नं. प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले धनकुटामा शिक्षण अस्पताल सञ्चालनका लागि विज्ञ समूह पठाईने जानकारी दिए । उनले सो कुरा धनकुटामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बताएका हुन् । पत्रकारहरुले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिदै मन्त्री घिमिरेले विज्ञ समूहले गरेको सम्भाव्यताका आधारमा यथाशीघ्र शिक्षण अस्पताल सञ्चालन गर्ने जानकारी दिए । धनकुटामा शिक्षण अस्पताल सञ्चालनका लागि चुलिवनस्थित नेपाल ट्रस्टको ९४ रोपनी जग्गा, हाल धनकुटा बहुमुखी क्याम्पसले उपभोग गरिरहेको क्यानडा सरकारले निर्माण गरिदिएको सामुदायिक चिकित्सा अध्ययन केन्द्रको आधुनिक भवन र ४७ रोपनी जग्गा र रेशम विकास कार्यालयको भवनसहित ४७ रोपनी जग्गा हालै सम्पन्न सर्वपक्षीय भेलाले प्रस्ताव गरिसको छ ।
मन्त्री घिमिरेले ऐनको अभावमा धनकुटास्थित शिक्षा र स्वास्थ्य निर्देशनालय कामविहीन भएको बताए । उनले निर्देशन मान्ने मातहातका कार्यालयनै नभएकाले यस्तो अवस्था आएको बताए । उनले चाडै प्रदेश सरकारले कानून बनाएर यि निर्देशनालयहरु चलायमान बनाउने जानकारी दिए ।
मन्त्री घिमिरेले हालको शिक्षानीतिलाई परिवर्तन गर्ने बताए । उनले अब ८० प्रतिसत प्राविधिक शिक्षा दिने गरी शिक्षानीति बनाउने तयारी भएको जानकारी दिए । मन्त्री घिमिरेले उत्तरपानीस्थित प्राविधिक शिक्षालयलाई व्यवस्थित बनाएर प्राविधिक शिक्षाको केन्द्र बनाउन निर्देशन दिएको बताए । उनले पाँचथर, ताप्लेजुङ्ग, संखुवासभा, तेह्रथुम र सोलुखुम्बु जिल्ला गरी प्रदेशका पाँच जिल्लामा प्राविधिक शिक्षालय विस्तार गरिने जानकारी दिए ।
सम्मलनमा मन्त्री घिमिरेले प्रदेश सरकार प्रदेश मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने तयारीमा रहेको जानकारी दिए । उनले मन्त्रिमण्डल विस्तारका लागि पार्टीमा छलफल भइरहेको जानकारी दिए ।
सो अवसरमा मन्त्री घिमिरेले प्रदेश सरकारले १ नं. प्रदेशलाई मानवमुक्त सडक बनाउने जानकारी दिए । उनले सडकमा वस्न वाध्यनागरिका वारेमा अध्ययन भइरहेको बताउँदै उनीहरुको उचित वासस्थानको व्यवस्था गर्न प्रदेश सरकार लागिरहेको बताए ।
मन्त्री घिमिरेले चिकित्सकहरु राजधानीमा मात्र बस्न चाहने र ग्रामीण जिल्लामा जान नचाहने बताए । उनले दुर्गम जिल्ला अस्पतालको डाक्टर अभाव पूर्तिका लागि करारमा चिकित्सक नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाएको बताए । उनले प्रदेशमा रहेका कर्मचारी संघीय सरकारले विभिन्न बहानामा केन्दमा तानेको र कर्मचारीले पनि प्रदेश सरकारलाई कुनै जानकारी नगराई जाने गरेकाले कर्मचारी समस्या रहेको बताए।
सहिदका परिवारलाई राहत सरकारले चाँडै दिने ः उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पोख्रेल
दुई तिहाईको बलमा सरकार स्वेच्छाचारिता तर्फ उन्मुख ः नेता पौडेल